के आइबुप्रोफेन र टायलनोल सँगै राख्न सुरक्षित छ? - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी चेकआउट औषधि बनाम मित्र कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कल्याण
मुख्य >> औषधि जानकारी >> के आइबुप्रोफेन र टायलनोल सँगै राख्न सुरक्षित छ?
के आइबुप्रोफेन र टायलनोल सँगै राख्न सुरक्षित छ?
ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) पीडा रिलिभरहरू दैनिक दुखाइ र पीडाको उपचार गर्न एक उत्तम विकल्प हो। तिनीहरू व्यापक रूपमा उपलब्ध छन् र उपचारलाई हल्कादेखि मध्यम दुखाइका विभिन्न अवस्थाबाट सहयोग गर्दछ: गला दुख्ने, मासिक धर्मको पेट, दाँत दुख्ने, sprains, र सबैभन्दा तीव्र दर्द। केहि सबैभन्दा लोकप्रिय दुखाइ औषधीहरू आईबुप्रोफेन र एसिटामिनोफेन हुन्।
तपाइँ एसेटिनोफेनलाई यसको ब्रान्ड नाम, टायलानोलबाट चिन्न सक्नुहुन्छ। इबुप्रोफेन एक सामान्य दर्द निवारक पनि हो जसलाई एडभिल र मोट्रिन भनिन्छ।
एसिटामिनोफेन एक यस्तो औषधी हो जुन अक्सर कलेजोले मेटाबोलिज हुन्छ, भन्छ सासन मसाची , MD,बेभर्ली हिल्स, क्यालिफोर्नियामा एक प्राथमिक हेरचाह चिकित्सक।इबुप्रोफेन एक एनएसएआईडी (नन्स्टेरॉइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स) हो जुन शरीरको एक विशिष्ट एन्जाइममा अवरोध उत्पन्न गर्दछ।
अर्को भिन्नता त्यो होएसिटामिनोफेन (एसिटामिनोफेन कूपन |एसिटामिनोफेन विवरणहरू) ज्वरो रिड्यूसरको रूपमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्दछ।आईबुप्रोफेन (आईबुप्रोफेन कूपन | आईबुप्रोफेन विवरणहरू)ज्वरोलाई कम गर्न मा प्रभावकारी छैन।
यो सिफारिश गरिएको रकममा सँगै एसिटामिनोफेन र आईबुप्रोफेन प्रयोग गर्न सुरक्षित छ। एक २०१ Co कोचरेन समीक्षा आइबुप्रोफेन प्लस प्यारासिटामोल (एसिटामिनोफेनको अर्को नाम) ले दुइटै एक्लो भन्दा राम्रो दुखाइ राहत प्रदान गर्‍यो र करीव आठ घण्टामा थप दुखाइ कम गर्ने सम्भावना कम गर्‍यो। A हार्वर्ड समीक्षा आइबुप्रोफेन र एसिटामिनोफेन जोडीएको ओपियोइड्स जस्तै कोडेइन वा विकोडिन जस्तो गम्भीर पीडाको लागि प्रभावकारी थियो।
यद्यपि यो पीडा कम गर्नेहरूलाई एकसाथ प्रयोग गर्न सुरक्षित छ, डा। मसाचीले दुर्लभ मामिलाहरूमा एक्सेटामिनोफेन र आईबुप्रोफेन एकसाथ लिन सिफारिस गर्छन्। कहिलेकाँही हामी बिरामीहरू आइबुप्रोफेन वा टाईलेनललाई विशेष गरी ज्वरो रिडसरको रूपमा लिन्छौं, त्यसैले हामी दुबै औषधीको फाइदा लिन सक्ने छौं साइड इफेक्टको जोखिमबिना।
सम्बन्धित: आइबुप्रोफेन र टायलनोल तुलना गर्नुहोस्
कति आईबुप्रोफेन र एसिटामिनोफेन म सँगै लिन सक्छु?
इबुप्रोफेन र एसिटामिनोफेन सुरक्षित रूपमा सँगै प्रयोग गर्न सकिन्छ तर राहत प्राप्त गर्न सँधै सम्भव न्यूनतम खुराकमा प्रयोग गर्नुपर्दछ र सिफारिस गरिएको दैनिक खुराक भन्दा बढि हुनु हुँदैन।
कोआईबुप्रोफेनको लागि सामान्य सुरक्षित खुराकहरू हरेक आठ घण्टामा [अधिकतम] mg०० मिलीग्रामसम्म र एसिटामिनोफेन six50० मिलीग्राम प्रत्येक hours घण्टामा सँगै लिइन्छ, सामान्य किडनी र कलेजोको कार्यहरू लाई ग्रहण गर्दछ, डा मासाचीका अनुसार।
ओभर-द-काउन्टर आईबुप्रोफेनको लागि मानक खुराक प्रत्येक hours घण्टा २००--4०० मिग्रि हो। वयस्कहरूले निरपेक्ष अधिकतम 00२०० मिलीग्राम आईबुप्रोफेनको प्रति दिन लिनु हुँदैन। धेरै बिरामी जनसंख्यामा उच्च खुराकको साथ प्रतिकूल प्रभावको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राख्दै बिरामीहरूले दुखाइ कम गर्न सबैभन्दा थोरै खुराक लिनुपर्दछ। बिरामीहरूले कम खुराकको साथ सुरु गर्नुपर्दछ, प्रति दिन १२०० मिलीग्राम भन्दा बढि मात्रा प्राप्त गर्न खुराक लिनु भन्दा पहिले निरपेक्ष अधिकतम दैनिक खुराक प्रति दिन 00२०० मिलीग्राम।
एसिटामिनोफेन सामान्यतया 325-650 मिलीग्रामको शक्तिमा उपलब्ध हुन्छ। एक डोज सामान्यतया दुई 32२5 मिग्रि गोली हो जुन हरेक छ घण्टामा लिइन्छ। एसिटामिनोफेनको अधिकतम मात्रा एक पटकमा १००० मिलीग्राम वा २ 24 घण्टा भित्र 000००० मिलीग्रामभन्दा बढी हुँदैन। दुर्लभ परिदृश्यहरूमा, स्वास्थ्यसेवा पेशेवरले बिरामीलाई २ may घण्टामा cet००० मिलीग्राम एसिटामिनोफेन लिन सुरक्षित छ भनेर सल्लाह दिन सक्छ। एसिटामिनोफेनको सिफारिश गरिएको रकम भन्दा बढी प्रयोग नगर्नुहोस्, विशेष गरी लामो समय अवधिमा र यदि हेल्थकेयर प्रोफेशनलको सल्लाहमा छैन भने किनभने यो कलेजोको लागि हानिकारक हुन सक्छ।
सँधै स्वास्थ्यसेवा पेशेवरलाई सोध्नुहोस्, जस्तै एक चिकित्सक वा फार्मासिष्ट, यदि तपाईं कहिले औषधि लिने बारे अनिश्चित हुनुहुन्छ भने। तीनिहरूले तपाईंलाई अन्य ओटीसी उत्पादनहरूमा लुकेका समान सामग्रीहरू समावेश गर्नमा मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ।
आईबुप्रोफेन र एसिटामिनोफेनको साइड इफेक्टहरू
यी दुई ओटीसी दुबै राहतलाई सिफारिश गरिएको खुराकमा सँगै राख्न सुरक्षित छ। दुबै दुखाइ कम गर्नेहरू पनि आउँदछन् साइड इफेक्ट , र तिनीहरू अधिक मात्रामा को लागी हानिकारक हुन सक्छ।
आईबुप्रोफेन को साइड इफेक्ट
ग्याँस वा फोहोर
टाउको दुख्ने वा हल्का टाउको
आइबुप्रोफेन र एसिटामिनोफेनको दुर्लभ तर गम्भीर प्रतिकूल घटनाहरूमा एलर्जी प्रतिक्रियाहरू (पुराना, पित्तीहरू, सूजन), घोरनापन, सास फेर्न वा निल्नमा कठिनाई, र छाती दुखाइ समावेश छ। धेरै आईबुप्रोफेनले ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव निम्त्याउँछ, र यसले पेटको अल्सर बिगार्न सक्छ। कलेजो क्षति एसिटामिनोफेनको अधिक प्रयोगमा हुन सक्छ। यी लक्षणहरूलाई मेडिकल ध्यान आवश्यक छ। तपाईले 11 call ११ मा फोन गर्नु पर्दछ वा आपतकालीन विभागलाई जति सक्दो चाँडो खोज्नु पर्छ।
कुन सुरक्षित छ: आईबुप्रोफेन वा एसिटामिनोफेन?
एउटा अर्को भन्दा सुरक्षित हुँदैन, डा। मसाची भन्छन्। ती दुबैको आफ्नै समस्या र साइड इफेक्ट र दुरुपयोगको लागि सम्भावना छ र सावधानीका साथ उपयुक्त मात्रामा लिनुपर्दछ कि ती प्रभावकारी छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि गैर-जोखिमयुक्त पनि। तर एउटा अर्को प्रति भन्दा प्रभावकारी हुँदैन, र कुन औषधि सेवन गर्ने भनेर बिरामीको लक्षणसँग मिल्नुपर्दछ (उदाहरणका लागि ज्वरो संयुक्त दुखाइ)।
OTC पीडा रिलिभरको मिश्रण
यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई सुरक्षित रूपमा ओटीसी दर्द रिलिभर्सलाई जोड्नुहोस् जटिलताबाट बच्नका लागि।
यसको मतलब के हो यदि तपाइँको हेमटोक्रिट कम छ
Ibuprofen एक NSAID हो र अन्य NSAIDs को साथ जोड्नु हुँदैन। एनएसएआईडीहरूले शरीरमा उस्तै संयन्त्र प्रयोग गर्दछ र संयुक्त हुँदा अधिक मात्रा र गम्भीर दुष्प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ।
एसिटामिनोफेन एनएसएआईडी होईन र एनएसएआईडीहरू जस्तै एडभिल, मोट्रिन, एस्पिरिन, वा एलेभ (नेप्रोक्सेन) सँग सुरक्षित रूपमा मिसिन सकिन्छ। औषधिहरू संयोजन गर्दा, सिफारिस गरिएको खुराक मात्र लिनुहोस्।
ओटीसी उत्पादनहरूका बारे सावधान हुनुहोस् जसमा NSAIDs र / वा एसिटामिनोफेन खोक्रा र चिसोका लक्षणहरू वा निद्रा सहायताको संयोजन संयोजनको रूपमा समावेश हुन सक्छ। सँधै फार्मासिष्ट वा स्वास्थ्य सेवा पेशेवरलाई सोध्नुहोस् यदि तपाईं कुनै पनि उत्पादनको अवयवहरूको बारेमा निश्चित हुनुहुन्न।
आईपुप्रोफेन र एसिटामिनोफेन पोस्टपरेटिभ दुखाइको लागि , Cochrane समीक्षा स्वास्थ्य को राष्ट्रीय संस्थानहरु मा प्रकाशित (NIH)
आईबुप्रोफेन र एसिटामिनोफेन संयोजन ओपियोइड्सको रूपमा प्रभावकारी , हार्वर्ड
दुखाइ कम गर्नेसँग सावधानी अपनाउनुहोस् , खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए)
के तपाइँ एक नुस्खा संग एक औषधि परीक्षण फेल गर्न सक्नुहुन्छ
कसरी एक डाक्टर को लागी बिना एक खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउन